Dot … – Page9– Blog by Tun Win Naing
ကဿျွန်တော့ရဲ့စက်ကနေ FTP server ပေါ်က File တွေကို download လုပ်လို့မရပါဘူး။ Error ပြလေ့ရှိပါတယ်။
PASV ကို disable လုပ်ထားရင်FTP server ကနေ download လုပ်လို့ရသွားပါတယ်။ Continue reading “Download from FTP”
Author Tun Win NaingPosted on February 25, 2010 November 15, 2011 Categories how to, WindowsTags download, FTPLeaveacomment on Download from FTP
“ကောင်းပြီလေ…. အကျွန်ုပ်ဆင်းပြီး တံခါးစောင့်မယ်။ ဒီသစ်သားပေါ် အသင်လာရပ်ပါ။ သို့သော် အသင်ကြားသမျှ၊ မြင်သမျှကို တစ်ခွန်းမှ ပြောခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ မှတ်ထားပါ” Continue reading “God and temple’s gatekeeper”
Author Tun Win NaingPosted on December 28, 2009 December 28, 2009 Categories StoryTags life, wishLeaveacomment on God and temple’s gatekeeper
Active multimedia ကဝယ်တဲ့ခွေ ကို
CPU 2.0GHz Core2Duo
RAM 4.0GB DDR2
NVidia 9200M GS 512MB
မှာ install လုပ်ပြီး သုံးရာမှာ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ အလွန်နှေးကွေး သည်ကိုတွေ့ရသည်။
forum များ အလိုအရ Update 11.0.1 ကို install လုပ်ပြီး
Edit > Preferences > Performances…
Memory usage ကို 1024
Cache level ကို 8
Enable OpenGL Drawing ကို ရွေးချယ်ပေးပြီးသော အခါတွင် အထက်ကဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ နှေးကွေးမှုများမရှိတော့ သည်ကိုတွေ့ရသည်။
Active မှ ခွေကို ခွေပေါ်မှ တိုက်ရိုက်သွင်းယူ၍ မရပါ။
၁. dvd ပေါ်မှ file များကို computer ထဲတွင် Adobe CS4 ဆိုသော folder တစ်ခုဆောက်၍ ထို folder အောက်တွင် ထားပါ
၂. setup file ကို run ၍ CS4 သွင်းပါ။ trial အနေဖြင့်သာသွင်းပါ။
၃. အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရှိသော update 11.0.1 ကို download လုပ်၍ install လုပ်ပါ။
၄. အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပြုပြင်ထားသော amtlib.dll ကို ရှာ ၍ download လုပ်ပါ။
၅. computer အတွင်းရှိ amtlib.dll များကို အထက်ပါဖိုင်ဖြင့် အစားထိုးပါ။
၆. program စတင်သော အချိန်တွင် နံပါတ်တောင်းသော အခါ dvd ခွေပေါ်မှ ကီး ဖြင့် ကီးရယူပြီး သွင်းပါ။
Author Tun Win NaingPosted on August 2, 2009 March 2, 2010 Categories how toLeaveacomment on Adobe Photoshop CS4 Extended
Sun Certified Java Programmer (SCJP) အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် java programmer လုပ်မယ့်သူဖြစ်ဖြစ် ဖတ်သင့်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ စာအုပ်များ
Continue reading “Java ebooks”
Author Tun Win NaingPosted on May 26, 2009 December 28, 2009 Categories bookTags java, programming, scjpLeaveacomment on Java ebooks
Zawgyi-One fonts in WordPress
HTML page မှာ မြန်မာစာပေါ်ဖို့အတွက် font face ကို ပြောင်းပေးရပါတယ်။
content နဲ့ presentation ခွဲဖို့အတွက် font ကို css မှာ သွားပြောင်းပါမယ်။
font: 13px ‘Zawgyi-One’, zawgyi1, arial, sans-serif;
Continue reading “Zawgyi-One fonts in WordPress”
Author Tun Win NaingPosted on May 24, 2009 March 2, 2010 Categories how toTags font, wordpress, zawgyi4 Comments on Zawgyi-One fonts in WordPress
5th ICT exhibition was held from 23rd to 25th Feb, 2007. I wandered around and foundalaser printer I could afford with my money. Canon LBP 2900. Thre price in exhibition is around K190,000/- (i.e. 155 US$). I found that at the other shop 188,000. The gap is 2,000. I came home and looked for the price in internet and found out it is just $110.
I have no choice. I went and bought it in 25th. Assembled and tested it. Result is pretty good: little warming up time, good speed (12ppm), low noise.
But the Driver in CD (come along) is out of date: 1.0 version (current version is 3.0). Nevermind, I downloaded it and installed it. I feel satisfied with my new printer until I found out there is no duplexing feature. :<
Author Tun Win NaingPosted on February 27, 2007 March 2, 2010 Categories how toTags printerLeaveacomment on Canon LBP 2900